Flyer - Reward Foundation - Jacaylka, Galmada iyo Internetka
Bogga ugu weyn Flyer
Boggan waxaad ka heli kartaa waraaqaha "The Reward Foundation" oo dejiya wixii aan qabano. Nuqulkan waxaa lagu daabacay July 2017.
Hay'adda 'Reward Foundation' waxaan ku siineynaa si sahlan oo la fahmi karo, macluumaad cilmiyaysan oo madax bannaan oo loogu talagalay qof walba oo ku saabsan jacaylka, galmada iyo internetka. Fadlan isticmaal oo wadaag wadaag-yadeena, laakiin noo aqoonso halka ay ka timid. Waxaan u adeegsannaa liisanka 'Creative Commons CC-BY-ND.
Ruqsadani waxay u oggolaaneysaa dib-u-qaybinta, ganacsiga iyo kuwa aan ganacsiga ahayn, illaa iyo inta laga gudbayo iyada oo aan la beddelin iyo guud ahaan, iyada oo lagu amaanayo The Reward Foundation. Si aad u aragto warqadda shatiga, fadlan guji halkan. Si aad u aragto xeerka sharciga, fadlan guji halkan.
Soo qaado Flyer
Riix halkan si aad u soo dejiso Abaalmarinta Abaalmarinta Abaalmarinta…